रचना रिमालको मेरो धड्कन सार्वजनिक ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित) – SUDUR MEDIA
December 29, 2020 AdminLeaveaComment on रचना रिमालको मेरो धड्कन सार्वजनिक ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
पछिल्लो समय सांगितिक क्षेत्रमा चर्चामा मिठो स्वरले चर्चा कमाएकी रचना रिमालको नयाँ गित ‘मेरो धड्नक’ सार्वजनीक भएको छ । रचनाको साथमा संगीत संयोजकमा उस्तै स्वरका धनि पुस्कर सुनुवार रहेका छन् । रचनाका हरेक गितले बजारमा एउटा तरंग छाएको समयमा पुनः अमिर माबो र पासाङ तामाङको शब्दलाई उनले भाव प्रदान गरेकी हुन् ।
रिमालको स्वरको जादुले हुन त हरेक शब्दलाई काबुमा पार्न सफल छिन् गायीका रिमाल यद्यपी पुन मेरो धड्कन बोलको गितलाई पनि आफ्नो स्वरको जादुमा पार्न सफल भएकि हुन् । गायिका रिमाल र गायक सुनुवारको धेरै गितहरु बजारमा आइसकेका छन् भने यो गित पनि बजारमा आइसकेको छ । भनिन्छ नि दुनियाँ प्रेममा बाँधिएको छ ।
हुन त प्रेमलाई अहिले सम्म कुनै शब्द तथा वाक्यले परिभाषित गर्न सकेको छैन तैपनि भाव भने हरेक शब्दले दर्शाउने छ । यसैको उदाहरण हो ‘मेरो धड्कन’ गित गायक पुस्कर सुनुवारकै युट्युब च्यानलबाट बजारमा आइसकेको छ । गीतको भिडियोलाई मोहन सुनुवार नबिनले सम्पादन गरेका हुन्। थप हेर्नुहोस् भिडियोमाः